Izindaba - Yiziphi izinto ezihamba phambili kakhulu kule nkathi kaKhisimusi yokuhlobisa kwasendlini
Iyiphi into ethandwa kakhulu kule sizini kaKhisimusi?
Njalo ngenkathi kaKhisimusi, ungabuza ukuthi yiziphi izinto ezihamba phambili zokuhlobisa ikhaya? I-anwser mhlawumbe isihlahla sikaKhisimusi, ukukhanya kwezintambo zikaKhisimusi, iSanta Sack, amakhadi kaKhisimusi noma enye into.
Kepha kule sizini, into ehamba phambili kakhulu, ngiphakamisa ukuthi isiphanyeko sensimbi somqhele kaKhisimusi, isihlahla nesitokisi (isiphanyeko sensimbi).
Khumbula, ngezinkathi zikaKhisimusi ezedlule, uzomisa isihlahla sikaKhisimusi, ufake izimbali zekhisimusi, futhi okubaluleke kakhulu, uzolenga amasokisi athile odongeni noma eziko lezingane, uma ikhaya lakho lenzelwe lokhu ngokucophelela indawo, lapho-ke ungadlulisa okulandelayo;
uma indlu yakho ingakhelwanga ukuba nendawo yokulengisa umqhele, amasokisi, ngakho-ke isiphanyeko sensimbi sizokusiza ukuxazulula le nkinga ngokushelela.
I-Metal hooker enesifiso esikhethekile izokusiza ube nendawo yokulengisa umqhele, imihlobiso yezihlahla, amasokisi amnandi kaKhisimusi; futhi ephuzwini elibaluleke kakhulu, ngeke kulimaze ifenisha esegumbini lakho, futhi ungayihambisa kunoma iyiphi indawo egumbini lakho, hhayi endaweni eyodwa kuphela, elungele umhlobiso.
Ngakho-ke iphuzu ngalesi sikhathi seXmas ukuthi ube nesiphanyeko sensimbi somqhele wakho kaKhisimusi namasokisi.